प्रधानमन्त्रीको प्रश्न : ९ महिनामा दुनियाँमा कुन एअरपोर्ट बन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ९ महिनामा जति सकेको कामहरू गरेको बताएका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम अनुसार काम गरिरहेको दावी गरे।
‘९ महिना बितिसक्यो, एअरपोर्ट किन बनेन ? कसैकसैले यस्तै कुरा गर्छन्’, प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गरे, ‘९ महिनामा दुनियाँमा कुन एअरपोर्ट बन्छ ?’
मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि किन पूरा भएन भन्ने आलोचना आफूले सुनेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकार गठन भएपछि दिनरात गरेर काम भइरहेको दावी गरे। ९ महिनामा जति काम गर्नुपर्ने हो त्यति काम भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्रीले जनता निराश हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताए।
‘९ महिनामा किन यस्तो भएन र किन उस्तो भएन भनेर समाजलाई अल्मल्याउन खोजिएको छ। ९ महिनामा हुनुपर्ने काम भएको छ। जनता निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन’, प्रधानमन्त्रीले भने।
सरकार नीति, कार्यक्रम र भिजनमा स्पष्ट रहेको र कार्यान्वयनको दिशामा रहेको उनले बताए। ‘हामी परिमाणमा जान चाहन्छौँ। जनताले देखाएको बाटोमा नेपाल हिँड्छ।’
स्वदेशमा कामदार अभाव वैदेशिक रोजगारी कहिलेसम्म?
सडक सुरक्षामा राज्यको दायित्व
चाइना ट्रेडको नाफा एक करोड ५१ लाख चाइना ट्रेडको नाफा एक करोड ५१ लाख author-image अन्नपूर्ण समाज २९ असोज २०७५ १४:३०:०० change fontchange fontchange font 90 SHARES काठमाडौं : चाइना ट्रेड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले एक वर्षको अवधिमा सेयर पुँजी करिब एक करोड वृद्धि गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा संस्थाको सेयर पुँजी आठ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवमा यस्तो पुँजी सात करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो। गत आवमा संस्थाको जगेडा कोष पनि २१ प्रतिशत वृद्धि भइ एक करोड ९१ लाख रुपैया पुगेको छ। संस्थालाई आर्थिकरूपमा सबल बनाउन जगेडा कोष बृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिँदै आएको छ। संस्थाको कुल सम्पत्ति ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चाइना ट्रेड बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको काठमाडौंमा सम्पन्न ११औं वार्षिक साधारणसभामा यो जानाकारी दिइएको हो। गत आवमा संस्थाको निक्षेप पनि वृद्धि भएको छ। असारसम्म संस्थाको निक्षेप २४ करोड ६८ लाख ७७ हजार पुगेको छ। यो निक्षेप अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो वर्ष निक्षेप २१ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो। संस्थाले हाल विभिन्न ९ प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गरिरहेको छ। यसमा नियमित बचत खाता, सामान्य बचत खाता, विशेष चाइना ट्रेड बचत खाता, नारी बचत खाता, बाल बचत खाता, सरप्लस बचत खाता, जम्को बचत खाता र कोसेली बचत खाता सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसले पनि निक्षेप बढाउन सहयोग पुगेको छ। गत आवमा संस्थाले ३२ करोड ५० लाख रुपैया कर्जा लगानी गरेको छ।यस अवधिमा १९६ जना सेयर सदस्यले कर्जा लगेका छन्। यसले व्यावसायिक कर्जा, घरजग्गा कर्जा, सवारीसाधन कर्जा, सेयर कर्जा, कर्मचारी कर्जा र अन्य कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ। गत आवमा संस्थाले एक करोड ५१ लाख ७५ हजार सञ्चालन मुनाफा गरेको छ। यसबाट राज्यलाई २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ। संस्थाले मोबाइल बैंकिङ,एसएमएस बैकिङ, फेसबुक पेज, वेवसाइट, ग्रुप एसएमएस प्रणालीलगायत आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ। यस सहकारीको नेतृत्व वर्ग र कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता जनाउंदै आएको छ। संस्थामा असारसम्म सेयर सदस्य संख्या ९१० पुगेको छ। साधारणसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली,राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङ, जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौंलागाईं, अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठलगायतले सहकारीले मुलुकको विकासका लागि महत्वपूण योगदान गरेको बताए। संस्थाले अन्य केही सहकारी संस्थालाई समेत एकीकरण गरी सबल संस्था निर्माण गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि भूमिका खेल्ने, गुणस्तरीय व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरी उच्चस्तरीय सेवासुविधा सेयर सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेलगायत नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। बैंकका कर्मचारी घरमै पुगेर बृद्धभत्ता बाँडे
देशभर ११ नदी डाइभर्सन गरिँदै
नेपाली कागजमा लगानी गर्न इयू इच्छुक
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण
चाडपर्वपछि चिनीमा सार्वजनिक लेखा समितिकाे चासो
सामाजिक सुरक्षा अभियानमा सघाउन निजी क्षेत्र तयार
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा (LIVE)